I-Balihoo: Ukuzenzekelayo Kwezentengiso Zendawo | Martech Zone
Namuhla besinakho UShane Vaughan ohlelweni lomsakazo luxoxa ngemishini yokuthengisa yasendaweni. UShane uyiCMO yeBalihoo, inkampani enikezela ngezinsizakalo zokumaketha zasendaweni. IBalihoo iyipulatifomu yokumaketha ezisebenzisela izinkampani zamabhizinisi ezinezidingo zokumaketha ezingeni lendawo, njengama-franchise, ukusatshalaliswa kwezitolo, noma izinkampani zensizakalo yendawo. Izibonelo zifana Ikhodi Yezobuchwepheshe, IGeico, KumatilasiFirm ukubiza abambalwa.
Lalela Ingxoxo yethu noShane Vaughan
UBalihoo ungumhlinzeki uNdunankulu wobuchwepheshe bokumaketha kwasendaweni kanye nezinsizakalo kumikhiqizo kazwelonke enezidingo zokumaketha zasendaweni. I-Balihoo inika amandla ukumaketha okusezingeni lebhizinisi ezingeni lendawo futhi inika imikhiqizo kuzwelonke ukubonakala okugcwele kuyo yonke imisebenzi yokuthengisa yendawo kanye nemiphumela.
UShane Vaughan kwezokuMaketha kwasendaweni:
UBalihoo uchaza izidingo nezinzuzo zokuzenzakalela kokumaketha kwasendaweni:
Finyelela amathemba eduze nendawo yokuthenga - Ukuziphatha kokuthenga komthengi kushintshile. Iwebhu yasendaweni isetshenziswa kakhulu futhi izinhlobo zemidiya eziningi zifakwa enqubweni ejwayelekile yokwenza izinqumo. Ukuzenzakalela kwasendaweni kwenza imikhiqizo kazwelonke igcine ukulawula isikhathi eside kunqubo yokuxhumana nokuthengisa.
Susa ukuthembela kubalingani bendawo nabalingani - Thatha ubuchwepheshe bakho bokumaketha bukazwelonke ubenze bube bendawo. Finyelela izimakethe eziningi zasendaweni ngomzamo omkhulu njengokwenza umkhankaso owodwa futhi uqonde izimakethe zasendaweni nge analytics ngakho-ke ungathuthukisa imbuyiselo yomkhankaso kazwelonke kutshalomali.
Thola imiphumela efike ngesikhathi, ehlanganisiwe yemizamo yokumaketha yendawo - Sebenzisa kwasendaweni analytics ukukhomba izitayela ezimakethe nokuthuthukisa imizamo yomkhankaso kazwelonke.
Ukucinga nezenhlalo kuyashayela ukumaketha kwasendaweni kakhulu futhi akwanele ukuthi le mikhiqizo emikhulu ibe khona ezweni lonke. Abathengi namabhizinisi basesha esifundeni basebenzisa usesho oluqondiswe ngokwendawo. Ngisho nangaphandle kwemigomo yokuma kwezwe, izinjini zokusesha zisebenza ukukhomba kwendawo ngokuya ngendawo okuyo umsebenzisi… noma ukuthonywe yinethiwekhi yomsebenzisi. Ngamanye amagama, indlela eningi yokusesha ibhekiswe ngezindlela zokuma komhlaba futhi ayikwazi ukushaywa indiva.
I-Balihoo inikeza usizo lwewebhusayithi yendawo, ukumaketha okubambisene, ukumaketha kokubambisana kanye nokukhangisa, nokwakhiwa kwezikhangiso kwiphakeji elilodwa elinikeza indawo esidayisa amabhizinisi amancane endawo amandla okuphatha kalula imali abayisebenzisayo yokumaketha futhi baqonde lapho kubuya khona utshalomali.
Tags: I-Balihooukumaketha kwendawoezenzekelayo zokumaketha zasendaweniukusesha kwendawomarketingushane vaughan
I-Formstack: I-Vault's Credential Vault Yenkampani Yakho
Okushiwo Imibala Ngomkhiqizo Wakho